Credit: Funny Stuff
I'm proud that I c…
The WebMinster WebPlayer isapowerful MP3 Player which is based on Macromedia's Flash MX. With this MP3 Player you are able to play MP3 Files without any programming directly within your homepage! Due its small file size it can be loaded quickly and doesn't cause more traffic than an image! Download Player (22KB) [Player Manual]
Related posts : Jeroenwijering Flash MP3 Player, Player with .m3u
ဘာတွေဆိုထားမှန်း အနော်လည်း နားလည်ဝူး။ BurmaDigest ကနေရလို့ နားထောင်ကြည့်တာ ဟီးဟီး :P တီချင်းလေးက နားထောင်ရို့တော့ကောင်းသား။ ချာသားတွေကတော့ အီမှန်တွေကြီးပဲ။ ကြိုက်လို့ တိမ်းချင်တယ်ချိုရင်လည်း ဒီမှာ ယူနော် ... အာ .. ဘယ်သူ့ဆီက အကျင့်တွေ ကူးသွားပြီလဲ မသိဘူး :P
Credit : BurmaDigest,Evoca
ယောင်္ကျားလေးဖြစ်သော်ငြား ဘောလုံးကန်ခြင်း၊ ဘောလုံးပွဲကြည့်ခြင်း တို့အား ငယ်ငယ်ကတည်းက ၀ါသနာမပါ။ ဘော(လုံး)နဲ့ပက်သက်လာရင် Snooker နှင့် Table Tennis ကိုပဲ နှစ်သက်စွာ ကစားသည်။
ငယ်ငယ်က အတန်းထဲတွင် အိပ်ငိုက်လွန်း၍ ဆရာ/ဆရာမများ ခဏခဏ ကြိမ်ဆဲတာ ခံရဖူးသည်။ တစ်ခါတစ်ခါ မြေဖြူခဲ Duster တို့နှင့် ညားရတတ်သည်။ လဘက်သုပ် နှင့် ကော်ဖီ စားပြီး သောက်ပြီးသည့်တိုင်အောင် အိပ်ချင်စိတ် မပျောက်သဖြင့် အိပ်ငိုက်သည့်လောက၌ ဆလံ ပေးခံရသူဖြစ်၏။
စာကြည့်/ဖတ်ပါက တစ်နာရီမပြည့်ခင် အိပ်ချင်လာပြီး အင်တာနက် ကြည့်ခိုင်း (သို့) စကားများခိုင်းပါက မိုးအလင်း ကြည့်နိုင် ပြောနိုင်သည့် အံ့သြဖွယ် စွမ်းရည်ကို ပိုင်ဆိုင်သည်။
အိမ်မှာနေသည့်အခါ ကော်ဖီကို တစ်နေ့ နှစ်ခွက်ထက်မနည်း နှစ်သက်စွာ သောက်သုံးတတ်ပြီး အိမ်အပြင်ထွက်သည့်အခါ လဘက်ရည်ကို သောက်သုံးတတ်သည်။
မေမြို့ တောင်ကြီး စသော တောင်ပေါ်မြို့ကလေးများကို နှစ်သက်စွဲလမ်းသည်။ မေမြို့ ၂၁ မိုင်သို့ ကြာဇံဟင်းခါး သောက်ရန်သက်သက် သွား…
မပါဝင်လိုသော ကန့်ကွက်လိုသော Blogger မ…
Lyrics Plugin isapiece of software tailored for music fans. To put it simply - it is an add-on to view lyrics in WinAmp or Windows Media Player. No more searching for lyrics. Just start listening to your favourite songs and lyrics will be displayed automatically.
သီချင်းနားဆင်ရင်း စာသားတွေပါ တစ်ခါတည်း ကြည့်လို့ရပြီ။ Player နှစ်ခု ( Winamp and Window Media Player ) ကို Suppport လုပ်ပါတယ်။ "လိုချင်ဝယ်ထား ကြိုက်ရင်ဆောင်ထား" ဆိုတဲ့ စကားအရ အခု မောင်CMS Download လုပ်ပြီး သုံးနေပြီ :) Check : www.lyricsfly.com as well
အမေများအဖွဲ့ နှင့် ညိုမြ သီချင်းကလည်း ပွဲ တော်တော်ဆူသွားစေပါတယ်။
နောက်တစ်ကြိမ် ကဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ရတဲ့ အထိပါပဲ။
အမေအဖွဲ့ကို အားပေးနေကြတဲ့ ပရိသတ်များ
က မယ်ဆို တီးပါမယ် ရှက်လို့မနေနဲ့ကွယ်
London (Colindale) Thingyan - 1, 2, 3, 4, 5, 6
Myanmar Muisc Box - ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ သီချင်းလေးတွေနဲ့ စာသားလေးတွေကို စုစည်းထားတဲ့ Blog တစ်ခုပါ။ MyanmarForum တွေကိုလည်ပတ်ရင်း ရရှိခဲ့တဲ့ သီချင်းလေးတွေကိုလည်း အဲဒီမှာပဲ တင်ပေးထားပါတယ်။ အားလပ်ချိန်မှာ သီချင်း နားထောင်ဖြစ်တယ်။ မွေးမြေရပ်ခြားကို ရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက် သီချင်းနားဆင်ခြင်း၊ ဖိုရမ်ရေးခြင်း၊ Blog ရေးခြင်း စတာတွေနဲ့ပဲ Relax လုပ်နေရတာပါ။ တစ်ခါတလေတော့လည်း Chatting ပေါ့။ သီချင်းတွေက နောက်ပိုင်း အသစ်တွေတော့ ထွက်ပါရဲ့ ဒါပေမဲ့ "အသစ် ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း အဟောင်းကိုတော့ တလည်လည်" ဆိုသလိုပဲ အရင်တုန်းက သီချင်းလေးတွေကိုပဲ ပြန်ပြန်ပြီး နားထောင်ဖြစ်တယ်။ နောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ သီချင်းတွေကတော့ သံစဉ် စာသားတွေ ထပ်နေသလိုပဲ။ သီချင်းတွေထဲမှာ မွေးဖွားလာတာက အစ သေတဲ့အထိ အဆုံး စာသားတွေ ထည့်ရေးကြတယ်။ မုန့်လုံးကိုစက္ကူကပ်တာတို့ ရေခဲရေ ရောင်းတာတို့ကိုတောင် သီချင်းလုပ်ပြစ်လိုက်တယ် ပြတ်ရော :D ဒီ Blog မှာတော့ နားထောင်လို့ကောင်းမယ်ထင်တဲ့ သီချင်းလေးတွေကို ပုံမှန်တင်ဖြစ်သွားမှာပါ။ လာလည်တဲ့ Visitor တွေအနေနဲ့ နားထောင်ချင်တဲ့ သီချင်းများရှိရင်လည်း CBox မှာရေးပေးနိုင်ပါတယ်။ တတ်နိုင်သမျှ ရှာဖွေပြီး တင်ပေးသွားပါမယ…
Now includes CSS tools, Ajax components for building dynamic user interfaces, and intelligent integration with other Adobe software.
Spry framework for AjaxSpry dataSpry widgetsSpry effectsAdobe Photoshop and Fireworks integrationBrowser Compatibility CheckCSS Advisor websiteCSS layoutsCSS managementAdobe Device Central CS3Take A Tour
အကုန်လုံးကို Upload လုပ်ရတာ အဆင်မပြေတဲ့အတွက် Crack File သီးသန့်ပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
PeaceZone - Burmese Canteen
မုန့်ဟင်းခါး ... သရေမကျနဲ့နော် ... နောက်ဆုံးမှစားရင် ရေထိုးတာနဲ့ပဲ ညားမယ် :P
ရွှေခြည် - အချိုအရသာရှိသော မုန့်တစ်မျိုး
"ယနေ့စားဖွယ်"ဆိုတဲ့ စာလုံးလေးက တစ်နေနေရာကို သတိရသွားစေပါတယ်
London (Colindale) Thingyan - 1, 2, 3, 4, 5
ဗိုက်ကလည်းဆာလှပြီ queue ကလည်း အရှည်ကြီးပဲ
အင်း ... ဘာစားရင် ကောင်းမလဲ ?
ဘယ်လိုလဲ ... စားကောင်းရဲ့လား ?
Manchester မှ LondonThingyan လာသော မိတ်ဆွေများ
Hall အပြင်မှာလည်း အေးအေးဆေးဆေး စကားပြောကြ
London (Colindale) Thingyan - 1, 2, 3, 4
မန္တလေးသင်္ကြန်အကြောင်းပြောရင် အမှတ်ရဆုံးက MCC သင်္ကြန်ပါပဲ။ ဒီနှစ်တော်တော်စည်တယ်လို့ ကျွန်တော်ရဲ့ မိတ်ဆွေကြီး ကိုဆန်းဦး ဘလော့မှာ ဖတ်လို့ သိရပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် ဦးကျော်ဟိန်းလည်း လာတဲ့အတွက် ပိုပြီးစည်ကားသွားခဲ့ပါတယ်။ အစကတော့ ကိုဆန်းဦး နောက်နေတယ် မှတ်နေတာ။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ MCC မှာကလည်း ဦးကျော်ဟိန်းရှိတယ်လေ။ သူက ဦးကျော်ဟိန်းထက် ပိုချောတယ်။ ဟိဟိ ... ကြားရင်တော့ ၀မ်းသာနေမလား အမြင်ကတ်နေမလားပဲ။ တကယ်ပါ မယုံရင် MDY MCC မှာ သွားကြည့်လိုက်ပါ။ MD ဦးကျော်ဟိန်းလို့ မေးလိုက်ရင် တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
စိတ်မကောင်းစရာသတင်းတစ်ခု အနေနဲ့ သူငယ်ချင်း မောင်မျိုးအောင် မေးစိ ပေါက်သွားတယ်လို့ကြားပါတယ်။ ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ။ တော်သေးတယ် မေးစိပဲပေါက်လို့။ တစ်ခြားနေရာသာဆို မလွယ်ရေးချမလွယ်။ မတော်တဆလား ဒါမှမဟုတ် သင်္ကြန်အတွင်း ယမကာတန်ခိုးကြောင့် ဖြစ်သွားတာလားတော့မသိ ဟိဟိ။ ကျန်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ Sedona နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်က Premier Pandal မှာ ရှိကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ မနှစ်ကတော့ Domino Pandal နဲ့ နှစ်ပါးသွားခဲ့ကြတယ်။ လူတိုင်းကတော့ သင်္ကြန်ကို စီးပွားရေးသင်္ကြန်ဆိုပြီး ပြောပြောလာတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဟုတ်လည်း ဟုတ်နိုင်ပါတယ်။ စီးပွားရေးအခြေအနေေ…
ကိုညီ (တေးအေးရိပ်) ၊ ဘုန်းဘုန်း ဦးဥတ္တရ
ရန်ကုန် မြောင်းမြကျောင်းမှ ဘုန်းဘုန်း
သိကြားမင်းနဲ့ နတ်သားကို ရိုက်တာ SnowMode ၀င်နေတော့ ပြင်စရာမလိုပဲ
ကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါတွေတောင် ထွက်လာတယ် ဟိဟိ
BlackHole အဖွဲ့ ဆိုထားထဲ့ သနပ်ခါး ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးပါ။ အခုတလော တော်တော်လေး နားထောင်ဖြစ်ပါတယ်။ MTV ကိုလည်း YouTube မှာ ကြည့်ရှူ့နိုင်ပါတယ်။ အခုခေတ်ကြီးမှာတော့ သနပ်ခါးလိမ်းတဲ့သူ ရှားသွားပါပြီ။
ပါးပြင်မှာ သနပ်ခါးလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာကွာ
သူများတွေထက် မထင်ရှားလည်းပဲ ကိုယ့်အတွက် လမင်းလေးပါ
အမြဲတမ်း ပြုံးနေလိုက်ပါ ရိုးရိုးလေး မင်းမျက်နှာ
ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးအိမ်ထဲမှာ အချစ်စိတ်တို့ နိုးထလာ ဒီတစ်သက်စာ ချစ်မေတ္တာ
မိုးပေါ်က နတ်သမီးလေးလား အသက်ရှူမှားလောက်တယ်ကွာ
ရင်အေးစေတဲ့ ဒီအပြုံးလေးနဲ့ အရိပ်ဖွဲ့လာအိပ်မက်မှာ
ရင်အေးစေတဲ့ ဒီအပြုံးလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ မိန်းကလေးရာ
ဒီနေ့ Assignment လေးတွေလုပ်ရင်း ပျင်းလာတာနဲ့ သီချင်းနားထောင်မယ်ဆိုပြီး Winamp ကိုဖွင့်လိုက်တယ် အသံထွက်မလာဘူး။ Error ပြတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ SoundDriver ကိုပြန်ပြီး reinstall ပြန်လုပ်လိုက်တယ်။ အိုကေသွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြဿနာက YouTube က Movie တွေကြည့်ရင် အသံက ထွက်မလာပြန်တော့ဘူး။ အထူးအဆန်းပဲ။ တစ်ခါမှ မဖြစ်ဖူးဘူး။ ဒါနဲ့ Control Panel ထဲက Sound ကို ဖွင့်ကြည့်တော့ ဒီ Error ကိုပြတယ်။
Solution ကို လိုက်ရှာလိုက်တော့ ဒီမှာ တွေ့တယ်။ ဒါနဲ့ အဲဒီ Step တွေအတိုင်း လိုက်လုပ်ကြည့်မှ အိုကေသွားတယ်။ ဖြစ်လိုက်ရင် အဆန်းတွေကြီးပဲ။
Understand the design process, from discovery to implementationDevelop pleasing layouts using grids, the rule of thirds, balance, and symmetryUse color effectively, develop color schemes and createapaletteUse textures: lines, points, shapes, volumes, and depthLearn how good typography can make ordinary designs look greatEffective imagery: choosing, editing and placing imagesUnderstand what makes “good design”Follow an example design from concept to completionAnd lots more…View the Table of Contents | Download (pass:mandalay)
ဆွမ်းဆန်စိမ်း လောင်းရန် တန်းစီနေကြစဉ်
အလှူရေစက် လက်နှင့်မကွာ မြန်မာတွေရဲ့ ဓလေ့ပါ။
အန်တီဒေါ်မာမာအေး ဓမ္မပူဇာတေးတို့ဖြင့် ဖျော်ဖြေစဉ်
ဒေါက်တာဦးလှဘူးက စန္ဒရားတီးခတ်ပြီး ကူညီခဲ့ပါတယ်
ခေတ်ပေါ်တေးဖြင့်လည်း တစ်ဖန် ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်
ဦးရွှေရိုး နှင့် ဒေါ်မိုး
ကလေးနှစ်ယောက်ကို တကယ်ပဲ လေးစားချီးကျူးမိပါတယ်
မြန်မာနှစ်သစ် ၁၃၆၉ ခုနှစ်ကိုရောက်လာပြီ။ အသက်လည်း တစ်နှစ်ပိုကြီးလာပြီပေါ့။ အသက်ကြီးလာတာနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး စဉ်းစားတွေးတောလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ပို့စ် တော်တော်ရှည်သွားလိမ့်မယ်။ ဒီနေ့လိုနေ့မျိုးဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံက ဘုရားကျောင်းကန်တွေမှာ ကောင်းမှုအလှူပြုလုပ်သူတွေနဲ့ စည်ကားနေရောပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ မန္တလေးမှာဆိုရင် မဟာမြတ်မုနိဘုရား၊ အောင်တော်မူဘုရား တို့မှာ ဒီအချိန် ဒီနေ့ အရမ်းစည်ကားတာပေါ့။ သတ္တ၀ါတွေကို ဘေးမဲ့လွှတ်သူတွေ၊ စတုဒီသာကျွေးမွေးခြင်းသတဲ့ မြန်မာတို့ရဲ့ ချစ်စဖွယ်ဓလေ့စရိုက်တွေကို ဒီနေ့လိုနေ့မျိုးမှာ ပီပီပြင်ပြင် မြင်တွေ့နိုင်တာပေါ့။
ဒီနေ့ စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်မိတာတစ်ခုကတော့ မန္တလေးမှာရှိတုန်းကလို နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ ဘုရားကြီးကို အစောကြီးသွားပြီး မျက်နှာသစ်တော်ရေ နှင့် ရွှေဆိုင်း ကပ်၊ အပြန်မှာ အောင်တော်မူဘုရား ၀င်ပြီး ဖူးချင်တာပါပဲ။ ညဘက်ပိုင်းမှာတော့ လူကြီးမိဘတွေကို ကန်တော့ချင်တယ်။ သင်္ကြန်မှာ နှစ်တိုင်းသွားပြီး ကန်တော့ဖြစ်တဲ့ ဆရာမ ဒေါ်လှိုင်လှိုင်မြင့်ဆီကိုတော့ ဒီနှစ်မရောက်ဖြစ်တော့ဘူး။ ပြန်ရောက်ဖြစ်တော့မှပဲ ဆရာ၊ ဆရာမတွေကို လိုက်ပြီးကန်တော့ရင်း စကား အ၀ သွားပြောတော့မယ်။
သင်္ကြန်ဆိုတာကြီးကလည်း ရောက်ဖို့သာ အကြာ…
Muisc တွေနဲ့ပက်သက်တဲ့ WebSite ကောင်းလေးတစ်ခုပါ။ သီချင်းတွေနဲ့ ပက်သက်တဲ့ သတင်းတွေ၊ Music Editing Software တွေ၊ Music Book တွေ၊ Music Album တွေကိုပါ တစ်နေရာတည်းမှာ Download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။ သီချင်းချစ်သူများ အကြိုက်တွေ့စေနိုင်မည့် Site တစ်ခုဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။